Bokin'ny Apokalypsy – 2trondro
Home / Baiboly / Bokin'ny Apokalypsy
1:1 Ny Fanambaran'i Jesosy Kristy, izay nomen'Andriamanitra azy, mba hampahafantatra ny mpanompony ny zavatra tsy maintsy hitranga tsy ho ela, ary izay dikan'ny naniraka ny anjeliny tamin'ny mpanompony John;
1:2 efa nanolotra fijoroana ho vavolombelona ny Tenin'Andriamanitra, ary na inona na inona hitany dia ny filazana an'i Jesosy Kristy.
1:3 Sambatra izay mamaky na mandre ny tenin'ity faminaniana ity, ary izay mitandrina ny zavatra izay efa voasoratra ao. Fa efa akaiky ny fotoana.
1:4 John, mamangy ny fiangonana fito, izay any Asia. Anie ny fahasoavana sy ny fiadanana ho anareo, aminy izay, ary izay, ary iza no ho avy, ary avy amin'ny Fanahy fito izay eo imason'ny seza fiandrianany,
1:5 ary avy amin'i Jesosy Kristy, izay Vavolombelona marina, ny lahimatoa amin'ny maty, ary ny mpanapaka ny mpanjakan'ny tany, Izay efa tia antsika ka namaha antsika ho afaka amin'ny fahotantsika tamin'ny rany,
1:6 ary iza no nanao antsika ho fanjakana, ary ho mpisorona ho an'Andriamanitra sy ny Rainy. Ho Azy anie ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay mandrakizay. Amen.
1:7 Indro, dia tonga amin'ny rahona, ary ny maso rehetra hahita Azy, na dia ireo nandefona azy. Ary ny firenena rehetra amin'ny tany dia hitomany ho an'ny tenany ny azy. Na izany aza. Amen.
1:8 "Izaho no Alfa sy Omega, ny fiandohana sy ny fiafarana,", Hoy ny Tompo Andriamanitra, iza, ary izay, ary iza no ho avy, ny Tsitoha.
1:9 I, John, rahalahinao, ary miombona amin'ny fahoriana ary amin'ny fanjakana sy ny faharetana noho ny amin'i Kristy Jesosy, dia tao amin'ny nosy atao hoe Patmo izay, noho ny Tenin'Andriamanitra sy ny filazana an'i Jesosy.
1:10 Aho Fanahy tamin'ny Andron'ny Tompo, dia nandre teo ivohoko, toy feo, toy ny an'ny trompetra,
1:11 nanao hoe:, "Inona no hitanao, soraty eo amin'ny boky, ka ampitondray ho any amin'ny fiangonana fito, izay any Asia: tany Efesosy, sy Smyrna, ary ny Pergamus, sy Tyatira, sy Sardisy, ary Philadelphia, ary Laodikia. "
1:12 Dia nihodina aho, ka hahita ny feo izay niresaka tamiko. Ary nitodika manodidina, Hitako fa, indro fanaovan-jiro volamena fito.
1:13 Ary teo afovoan'ny fanaovan-jiro volamena fito iray mitovy ny Zanak'olona, mitafy ny tongony tamin'ny iray vestment, ary mifono ny tratrany miaraka amin'ny fehin-kibo volamena malalaka.
1:14 Fa ny lohany sy ny volony dia mifaritra, tahaka ny volon'ondry fotsy, na toy ny oram-panala; ary ny masony tahaka ny lelafo;
1:15 ary ny tongony varahina nitovy mamirapiratra, toy ny ao anaty lafaoro mirehitra; ary ny feony dia tahaka ny firohondrohon'ny rano be.
1:16 Ary an-tànany ankavanana, dia natao ny kintana fito; ary avy amin'ny vavany maranitra nivoaka sabatra roa lela; ary ny tavany dia tahaka ny masoandro, mamirapiratra amin'ny heriny rehetra, ny.
1:17 Ary nony nahita azy aho,, Dia niankohoka teo amin'ny tongony, toy ny olona maty izay. Ary nametraka ny tanany havanana tamiko, nanao hoe:: "Aza matahotra. Izaho no Voalohany sy Farany.
1:18 Ary mbola velona aho, na dia maty. Ary, indro, Velona koa Aho mandrakizay mandrakizay. Ary mihazona ny fanalahidin'ny fahafatesana sy ny helo.
1:19 Noho izany, Soraty ny zavatra izay efa hitanao, ary izay, ary izay tsy maintsy hitranga rehefa afaka izany,:
1:20 ny zava-miafina ny amin'ny kintana fito, izay efa nahita an-tanako ankavanana, sy ny fanaovan-jiro volamena fito. Ny kintana fito dia ny anjelin'ny fiangonana fito, ary ny fanaovan-jiro fito dia fiangonana fito. "
2:1 "Ary ny anjelin'ny fiangonana any Efesosy Soraty: Izao no lazain'ny olona iray izay mihazona ny kintana fito eny an-tànany ankavanana, izay mandeha eo afovoan'ny fanaovan-jiro volamena fito:
2:2 Fantatro ny asanao, sy ny zava-tsarotra sy ny faharetana, ary mba tsy haharitra izay ratsy. Ary noho izany, ianao efa nizaha toetra izay manambara ny tenany ho Apostoly, ary tsy, ary efa nahita azy ho mpandainga.
2:3 Ary manana faharetana ianao, noho ny anarako, ka tsy mba nihemotra.
2:4 Kanefa manan-teny aminao: fa efa niala tsy ny fitiavana voalohany.
2:5 Ary noho izany, tsarovy ny toerana izay efa lavo, ary manao asa fivalozana, ka manaova ny asa voalohany. Raha tsy izany, Dia ho avy aminao, ary hanaisotra ny fitoeran-jiro hiala amin'ny fitoerany, raha tsy mibebaka.
2:6 Kanefa izao no, fa halanao ny asan'ny Nikolaita, izay halako koa.
2:7 Na iza na iza manan-tsofina, aoka izy hihaino izay lazain'ny Fanahy amin'ny Fiangonana. Izay mandresy, Dia homeko hihinana avy amin'ny hazon'aina, izay ao amin'ny Paradisa ny Andriamanitro.
2:8 Ary ny anjelin'ny fiangonana any Smyrna soraty: Izao no lazain'ny Voalohany sy ny Farany, izay efa maty ary ankehitriny dia velona:
2:9 Fantatro ny fahorianao sy ny fahantranao, fa ianareo no manan-karena, ary ianareo dia niteny ratsy 'ireo izay manambara ny tenany ho Jiosy, ary tsy, nefa iza avy moa synagogan'i Satana.
2:10 Tokony hatahotra na inona na inona tao anatin'ny ireo zavatra izay dia hijaly. Indro, ny devoly dia ny sasany aminareo ao an-tranomaizina, mba halaim-panahy. Ary izao no ahitanareo fahoriana nandritra ny folo andro. Aoka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana, dia homeko anao ny satro-boninahitra fiainana.
2:11 Na iza na iza manan-tsofina, aoka izy hihaino izay lazain'ny Fanahy amin'ny Fiangonana. Na zovy na zovy no hanjaka, dia tsy ho azon'ny fahafatesana faharoa.
2:12 Ary ny anjelin'ny fiangonana ny Pergamus manoratra: Izao no milaza fa izay mihazona ny maranitra roa lela lefona:
2:13 Fantatro izay monina, izay misy ny foiben'ny i Satana no, ary fa ianareo no mihazona ny anarako ary tsy mba nandà ny finoana, na dia tamin'izany andro izany, rehefa i Antipasy tsy nivadika ny Vavolombelona, izay niaraka novonoina teo aminareo, teo amin'izay onenan'i Satana.
2:14 Kanefa manan-teny kely hiampanga anareo. Fa efa, amin'izany toerana, ireo izay mitana ny fampianaran'i Balama, izay nandidy Balaka hanisy mahatafintohina eo anoloan'ny zanak'Israely, mba hihinana sy hijangajanga.
2:15 Ary ianareo koa mba manana ireo izay mihazona ny fampianarana Nikolaita.
2:16 Koa manao fivalozana ho toy izany koa araka. Raha manao tsy, Dia ho avy aminao faingana Aho ka hamely ireo hiady ireo amin'ny sabatry ny vavako.
2:17 Na iza na iza manan-tsofina, aoka izy hihaino izay lazain'ny Fanahy amin'ny Fiangonana. Izay mandresy, Dia homeko mana miafina. Ary homeko azy ny fotsy marika, sy ny marika, misy anaram-baovao voasoratra efa, izay tsy misy mahalala, afa-tsy ilay mandray izany.
2:18 Ary ny anjelin'ny fiangonana any Tyatira soraty: Izao no lazain'i Zanak'Andriamanitra, Izay manana maso toy ny lelafo, ary ny tongony tahaka ny varahina mamirapiratra.
2:19 Fantatro ny asanao, ary ny finoana sy ny fitiavana, sy ny fanompoanao ary ny faharetana, ary ny vao haingana dia asa lehibe noho ny teo aloha ireo.
2:20 Kanefa manan-teny kely hiampanga anareo. Fa mamela ny vehivavy Jezabel, izay milaza ny tenany ho mpaminanivavy, mba hampianatra sy hitaona ny mpanompoko, hijangajanga sy hihinana ny sakafo ny fanompoan-tsampy.
2:21 Ary nomeko andro, ka dia mba manao fivalozana, fa izy dia tsy te hibebaka amin'ny fijangajangany.
2:22 Indro, Dia hanipy azy teo am-pandriana, ary izay mijangajanga aminy dia ho ao amin'ny fahoriana lehibe indrindra, raha tsy mibebaka amin'ny asany.
2:23 Ary hasiako zanany lahy ho faty, ary ny fiangonana rehetra hahalala fa Izaho no mandinika izay toetra sy ny fo. Ary homeko ho ianareo tsirairay avy araka ny asany. Fa Izaho kosa milaza aminareo hoe,
2:24 ary ny olon-kafa izay any Tyatira: Na iza na iza tsy mitana izany fotopampianarana, ary izay tsy 'mahalala ny halalin' i Satana,'Raha hoy izy ireo, Tsy nametraka hafa lanjany eo aminareo.
2:25 Na izany aza, izay anananao, hihazona ho azy mandra-piveriko.
2:26 Ary na iza na iza no handresy sy hitandrina ny asa hatramin 'ny farany, Homeko azy fahefana amin'ny jentilisa.
2:27 Ary Izy hanapaka azy amin'ny tehim-by, ka dia ho torotoro toy ny tanimanga ny mpanefy tanimanga.
2:28 Toy izany koa izay efa noraisiko tamin'ny Raiko. Ary homeko azy ny kintana fitarika andro.
2:29 Na iza na iza manan-tsofina, aoka izy hihaino izay lazain'ny Fanahy amin'ny Fiangonana. "
3:1 "Ary ny anjelin'ny fiangonana any Sardisy soraty: Izao no lazain'i izay manana ny Fanahy fiton'Andriamanitra sy ny kintana fito: Fantatro ny asanao, fa manana ny anarana izay velona, fa ianareo no maty.
3:2 Aoka ianao ho mailo, ka hanamarina ny zavatra sisa, fandrao maty avy tsy ho ela. Fa tsy mahita ny asa mba ho feno eo imason 'Andriamanitro.
3:3 Noho izany, hatrany ao an-tsaina ny fomba izay efa nandraisanao sy ny nandrenesanao, ary avy eo dia hitandrina izany ka mibebaha. Fa raha tsy ho mailo, Dia ho avy aminao toy ny mpangalatra, ka tsy ho fantatrao izay ora hihaviako aminao.
3:4 Fa misy anarana vitsy tany Sardisy izay tsy nandoto ny fitafiany. Ary izao hiara-mandeha amiko mitafy lamba fotsy, satria mendrika.
3:5 Na iza na iza manjaka, toy izany no hitafy fitafiana fotsy. Ary tsy mamafa ny anarany eo amin'ny bokin'ny fiainana. Ary Aho, fa hanaiky ny anarany eo anatrehan'ny Raiko sy eo anatrehan'ny anjeliny.
3:6 Na iza na iza manan-tsofina, aoka izy hihaino izay lazain'ny Fanahy amin'ny Fiangonana.
3:7 Ary ny anjelin'ny fiangonana any Filadelfia soraty: Izao no lazain'i ny Iray Masina, ny tena izy, Izay manana ny fanalahidin'i Davida. Izy mamoha ka tsy misy olona manidy. Mifarana izy ka tsy misy manokatra.
3:8 Fantatro ny asanao. Indro, Efa nasiako varavarana mivoha eo anatrehanao, izay tsy mahay hanakatona. Fa manana hery kely, ary efa nitandrina ny teniko, ka tsy mba nandà ny anarako.
3:9 Indro, Hatsahatro eo amin'ny synagogan'i Satana izay manambara ny tenany ho Jiosy, ary tsy, fa izy ireny mandainga. Indro, No hahatonga azy ireo hanatona sy ho mpivavaka eo anoloan'ny tongotrao. Ary dia ho fantany fa Izaho efa tia anao.
3:10 Satria efa nitandrina ny teniko ny amin'ny faharetana, Izaho kosa hiaro anao ho voavonjy amin'ny andro fakam-panahy, izay handresy izao tontolo izao mba hitsapana an'ireo mponina eto an-tany.
3:11 Indro, Manatona haingana aho. Tano mafy ny izay anananao, mba tsy hisy haka ny satro-boninahiny.
3:12 Na iza na iza manjaka, Aho, Hanandratra azy ho toy ny andry eo amin'ny tempolin'Andriamanitro, dia tsy hiala amin'izany intsony. Ary hosoratako eo aminy ny anaran 'Andriamanitro, ary ny anaran'ny tanàna ny Andriamanitro, Jerosalema vaovao izay midina avy any an-danitra avy amin'Andriamanitro, ary ilay anarako vaovao.
3:13 Na iza na iza manan-tsofina, aoka izy hihaino izay lazain'ny Fanahy amin'ny Fiangonana.
3:14 Ary ny anjelin'ny fiangonana any Laodikia manoratra: Izao no lazain'ny Amen, mahatoky sy marina ny Vavolombelona, Izy no voalohany ny zavatra noharin'Andriamanitra izao:
3:15 Fantatro ny asanao: fa tsy mangatsiaka, na mafana. Enga anie ianao fa na mangatsiaka na ho mafana.
3:16 Fa satria matimaty ianao ary sady tsy mangatsiaka na mafana, Dia hanomboka handoa anareo amin'ny vavako.
3:17 Fa manambara, 'Manan-karena aho, ary efa nampanan-karena fanampiny, ary efa-java-mahory. 'Ary tsy fantatrao fa ianao no ilay ory, ary fadiranovana, ary ny mahantra, ary jamba, ary mitanjaka.
3:18 Mamporisika anareo aho mba hividy amiko volamena, notsapaina amin'ny afo, mba ho karena ary mety hitafy fitafiana fotsy, ary toy izany koa ny henatry ny fitanjahanao mety hanjavona. Ary hosory ny masonareo amin 'ny maso odi, mba hahita.
3:19 Ireo izay tiako, I anariko sy hamaizako. Noho izany, ho be zotom-po ary manao asa fivalozana.
3:20 Indro, Efa mitsangana eo am-baravarana Aho ka mandondòna. Raha misy mihaino ny feoko ka mamoha ny varavarana ho ahy, Dia hiditra any aminy, ary hiara-misakafo aminy, ary izy amiko.
3:21 Na iza na iza manjaka, Dia havelako hiara-mipetraka aminy amiko eo amin'ny seza fiandrianako, koa araka izay efa naharesy ka nipetraka tamin'ny Raiko teo amin'ny seza fiandrianany.
3:22 Na iza na iza manan-tsofina, aoka izy hihaino izay lazain'ny Fanahy amin'ny Fiangonana. "
4:1 Rehefa afaka izany,, hitako, ary indro, novohana varavarana any an-danitra, sy ny feo reko niteny tamiko voalohany dia tahaka ny an'ny anjomara, nanao hoe:: "Niakatra tany eto, ary Izaho haneho anao ny zavatra tsy maintsy hitranga rehefa afaka izany zavatra izany. "
4:2 Ary niaraka tamin'izay dia tamin'izay dia voatsindrin'ny Fanahy. Ary indro, seza fiandrianana efa napetraka any an-danitra, ary nisy mipetraka eo amin'ny seza fiandrianan'i.
4:3 Ary izay nipetraka nisy toy izany koa ny amin'ny miseho amin'ny vato jaspy sy karneola ny. Ary nisy iridescence manodidina ny seza fiandrianana, amin'ny lafiny mitovy amin'ny onyksa.
4:4 Ary manodidina ilay seza fiandrianana efatra amby roa-kely seza fiandrianana. Ary teo ambonin'ireo seza fiandrianana, loholona efatra amby roa-polo nipetraka, niakanjo fotsy tanteraka fitafiana, ary tamin'ny lohany nisy satroboninahitra volamena.
4:5 Ary avy ao amin'ny seza fiandrianana, tselatra sy feo ary kotrokorana nivoaka. Ary nisy jiro fito nirehitra teo anoloan'ny seza fiandrianana, izay ny Fanahy fiton'Andriamanitra.
4:6 Ary rehefa heverina ny seza fiandrianana, nisy zavatra izay toa toy ny ranomasina fitaratra, toy ny vato krystaly. Ary eo afovoan'ny seza fiandrianana, ary manodidina ny seza fiandrianana, nisy zava-manan'aina efatra, feno maso teo anoloan'ny sy amin'ny indray.
4:7 Ary ny zava-manan'aina voalohany dia mitovy ny liona, ary ny zava-manan'aina faharoa mitovy zanak'omby, ary ny zava-manan'aina fahatelo dia manana tava tahaka ny lehilahy, ary ny zava-manan'aina fahefatra dia mitovy ny voromahery manidina.
4:8 Ary tsirairay ny zava-manan'aina efatra nanana elatra enina avy aminy, sy ny manodidina sy ny ao anatiny dia feno maso. Ary izy ireo naka manam-pitsaharana, na andro na alina, tsy nanao hoe:: "Masina, Holy, Masina ny Tompo Andriamanitra Tsitoha, izay, ary iza no, ary ho avy. "
4:9 Ary raha ireo zava-manan'aina no manome voninahitra sy haja ary fitahiana Ho an'Ilay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianan'i, Izay velona mandrakizay mandrakizay,
4:10 ny anti-panahy efatra amby roa-polo dia niankohoka niankohoka teo anatrehan'ny anankiray nipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianana, ary niankohoka Izay velona mandrakizay mandrakizay, izy ary nametraka ny satro-boninahiny eo anoloan'ny seza fiandrianana, nanao hoe::
4:11 "Mendrika, Ry Tompo Andriamanitray, handray ny voninahitra sy haja ary ny hery. Fa Hianao no nahary ny zava-drehetra, ka tonga sy namoronana noho ny sitraponao. "
5:1 Ary ao an-tànana ankavanan'ny an'Ilay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianan'i, Aho, dia nahita boky, nosoratana atiny sy ny ivelany, tombo-kase fito.
5:2 Ary hitako fa, indro, nisy anjely mahery, niantso tamin'ny feo mahery, "Iza no miendrika hanokatra ny boky sy hamaha ny tombo-kaseny?"
5:3 Ary tsy nisy olona afaka, na any an-danitra, na eto an-tany, na ambanin'ny tany, hanokatra ny boky, na mba ho faly mijery azy.
5:4 Ary nitomany indrindra, satria tsy nisy hita miendrika hanokatra ny boky, na ny mahita azy io.
5:5 Ary ny anankiray tamin'ny loholona nanao tamiko: "Aza mitomany. Indro, ny liona avy amin'ny fokon'i Joda, dia ny Solofon'i Davida, efa naharesy ka hanokatra ny boky sy hamaha ny tombo-kase fito. "
5:6 Ary hitako fa, indro, ary indro, teo afovoan'ny seza fiandrianana sy ny zava-manan'aina efatra, ary teo afovoan'ny ny anti-panahy, ny Zanak'ondry nitsangana teo, toy ny hoe voavono, tandroka fito sy maso fito, izay ny Fanahy fiton'Andriamanitra, nirahina ho any amin'ny tany rehetra.
5:7 Ary nanatona izy ka nandray ny boky avy any an-tanana ankavanan'ny an'Ilay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianan'i.
5:8 Ary nony namelatra ny boky, ny zava-manan'aina efatra sy ny loholona efatra amby roa-polo dia niankohoka teo anatrehan'ny Zanak'ondry, samy manana valiha, ary koa lovia volamena feno fofona, dia vavaka ataon'ny olona masina.
5:9 Ary izy ireo dia nihira vaovao canticle, nanao hoe:: "Tompo ô, ianao no mendrika handray ny boky sy ny tombo-kaseny hanokatra, satria voavono sy efa nanavotra antsika ho an'Andriamanitra, noho ny ra, avy amin'ny foko sy fiteny sy vahoaka ary firenena.
5:10 Ary efa nanao antsika ho fanjakana, ary ho mpisorona ho an'Andriamanitsika, Ary manjaka ambonin'ny tany izy. "
5:11 Ary hitako fa, indro, ary reko ny feon'ny anjely maro manodidina ny seza fiandrianana sy ny zava-manan'aina ary ny loholona, (ary ny isany dia an'arivony arivo)
5:12 nanao tamin'ny feo mahery: "Ny Zanak'ondry izay novonoina dia mendrika handray hery, sy ny maha-Andriamanitra, ary ny fahendrena, sy ny hery, sy ny voninahitra, sy ny voninahitra, sy ny fitahiana. "
5:13 Ary ny zavaboary rehetra any an-danitra, ary eto an-tany, sy any ambanin'ny tany, ary izay ao an-dranomasina: Efa reko izy rehetra, nanao hoe:: "Ho an'Ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana sy ho an'ny Zanak'ondry ho fitahiana, sy ny voninahitra, sy ny voninahitra, sy ny fahefana, mandrakizay doria."
5:14 Ary ny zava-manan'aina efatra dia nanao hoe:, "Amen." Ary ny anti-panahy efatra amby roa-polo dia niankohoka teo amin'ny tarehiny, ary niankohoka Ilay velona mandrakizay mandrakizay.
6:1 Dia hitako fa efa nanokatra ny Zanak'ondry ny anankiray tamin'ny tombo-kase fito. Ary reko ny anankiray tamin'ny zava-manan'aina efatra nanao hoe:, in-peo tahaka ny kotro-baratra: "Manatòna, ka jereo."
6:2 Ary hitako fa, indro, ary indro, nisy soavaly fotsy. Ary izy no ilay nipetraka teo dia mitazona tsipìka, ary nomena satro-boninahitra ho azy, Ary nivoaka handresy, ka dia mba handresy.
6:3 Ary rehefa novahany ny tombo-kase faharoa, Dia reko ny zava-manan'aina faharoa nanao hoe:: "Manatòna, ka jereo."
6:4 Ary nisy iray koa nivoaka soavaly, izay mena. Ary navela ho an'izay nipetraka teo amboniny izy mba hanaisotra ny fihavanana amin'ny tany, ary izy ireo hifamonoan'ny olona. Ary nisy sabatra lehibe nomena azy.
6:5 Ary rehefa novahany ny tombo-kase fahatelo, Dia reko ny zava-manan'aina fahatelo nanao hoe:: "Ho mby akaiky ka jereo." Ary, indro, ny soavaly mainty. Ary izy no ilay nipetraka teo dia mitana mizàna teny an-tànany.
6:6 Ary nandre zavatra toy ny feo teo afovoan'ny zava-manan'aina efatra nanao hoe:, "Ny roa venty ny vary tritika ho denaria, ary telo droa famarana ny vary hordea ho denaria, fa aza manisy ratsy ny divay sy ny diloilo. "
6:7 Ary rehefa novahany ny tombo-kase fahefatra, Dia reko ny feon'ny zava-manan'aina fahefatra nanao hoe:: "Manatòna, ka jereo."
6:8 Ary indro, nisy soavaly hatsatra. Ary izy no ilay nipetraka teo amboniny, ny anarany hoe Fahafatesana, sy ny helo nanaraka azy. Sy ny fahefana nomena azy nandritra ny efatra any ambanin'ny tany, handringana amin'ny sabatra, ny mosary, ary ny fahafatesana, sy ny zavaboary eto an-tany.
6:9 Ary rehefa novahany ny tombo-kase fahadimy, hitako, ambanin'ny alitara, ny fanahin 'ireo izay efa voavono noho ny tenin'Andriamanitra sy noho ny filazana izay nohazoniny.
6:10 Ary izy ireo niantso tamin'ny feo mahery, nanao hoe:: "Hafiriana, O Tompo masina sy marina, no tsy hitsara, fa tsy hanamarina ny rà manodidina ireo izay monina ambonin'ny tany?"
6:11 Ary nomena akanjo fotsy lava ny isan-olona izany. Ka dia nolazaina mba sasatra mandritra ny fotoana fohy, mandra-ny mpanompo namany sy ny rahalahiny, izay mba hovonoina dia tahaka ny azy voavono, ho vita.
6:12 Ary rehefa novahany ny tombo-kase fahenina, hitako, ary indro, ny horohoron-tany lehibe. Ary tonga mainty ny masoandro, toy ny kitapo lamba fisaonana, ary ny volana manontolo nanjary toy ny ra.
6:13 Ary ny kintana any an-danitra nilatsaka tamin'ny tany, fotsiny tahaka ny aviavy, hozongozonin'ny rivotra mahery, latsaka ny matoy aviavy.
6:14 Sy ny lanitra nihena, tahaka ny horonam-boky rehefa nanakodia ny. Ary ny tendrombohitra, ary ny nosy, dia niala tamin'ny toerana.
6:15 Ary ny mpanjakan'ny tany, ary ny mpanapaka, ary ny miaramila mpitarika, ary ny mpanankarena, sy ny matanjaka, ary ny olona rehetra, mpanompo sy maimaim-poana, niery tao anaty lava-bato sy tany amin'ny vatolampy eny an-tendrombohitra.
6:16 Ary hoy izy tamin'ny tendrombohitra sy ny vatolampy: "Mianjerà aminay ka afeno izahay amin'ny tavan'ilay ny mipetraka eo amin'ny seza fiandrianan'i, sy amin'ny fahatezeran'ny Zanak'ondry.
6:17 Fa tonga ny andro lehiben'ny fahatezerany dia tonga ny. Ary iza no mahajanona?"
7:1 Rehefa afaka izany,, Hitako fa, indro, nisy anjely efatra nitsangana teo ambonin'ny zorony efatra amin'ny tany,, nihazona ny rivotra efatry ny tany, ka tsy hitsoka amin'ny tany, na amin 'ny ranomasina, na amin'ny hazo akory aza.
7:2 Ary hitako fa, indro nisy anjely hafa koa niakatra avy tany amin'ny fiposahan'ny masoandro, nanana ny fanombohan-kasen'Andriamanitra velona. Ary niantso mafy ralehilahy, amin'ny feo mahery, ho ny anjely efatra izay navela hanimba ny tany sy ny ranomasina,
7:3 nanao hoe:: "Ataovy manisy ratsy eto an-tany, na any an-dranomasina, na ny hazo, mandra asio tombo-kase ny mpanompon 'Andriamanitsika eo amin'ny handriny. "
7:4 Ary nahare ny isan'izay voaisy tombo-kase izay: ary efa-polo amby zato-efatra arivo voaisy tombo-kase, avy isam-pirenena tamin'ny taranak'i Isiraely.
7:5 Avy tamin'ny firenen'i Joda, arivo amby iray alina no voaisy tombo-kase roa. Avy tamin'ny firenen'i Robena, arivo amby iray alina no voaisy tombo-kase roa. Avy tamin'ny firenen'i Gada, arivo amby iray alina no voaisy tombo-kase roa.
7:6 Avy tamin'ny firenen'i Asera, arivo amby iray alina no voaisy tombo-kase roa. Avy tamin'ny firenen'i Naftaly, arivo amby iray alina no voaisy tombo-kase roa. Avy tamin'ny firenen'i Manase, arivo amby iray alina no voaisy tombo-kase roa.
7:7 Avy tamin'ny firenen'i Simeona, arivo amby iray alina no voaisy tombo-kase roa. Avy tamin'ny firenen'i Levy, arivo amby iray alina no voaisy tombo-kase roa. Avy amin'ny fokon'i Isakara, arivo amby iray alina no voaisy tombo-kase roa.
7:8 Avy tamin'ny firenen'i Zebolona, arivo amby iray alina no voaisy tombo-kase roa. Avy tamin'ny firenen'i Josefa, arivo amby iray alina no voaisy tombo-kase roa. Avy tamin'ny firenen'i Benjamina, arivo amby iray alina no voaisy tombo-kase roa.
7:9 Rehefa afaka izany,, Aho, dia nahita vahoaka be, izay tsy misy olona aza ny hanisa, avy tamin'ny firenena rehetra sy ny foko sy vahoaka ary fiteny, nitsangana teo anoloan'ny seza fiandrianana sy eo anatrehan'ny Zanak'ondry, niakanjo akanjo fotsy lava, sampan-drofia teny an-tànany.
7:10 Ary ny vahoaka niantso, tamin'ny feo mahery, nanao hoe:: "Ny famonjena dia avy amin'ny 'Andriamanitra, izay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana, ary avy amin'ny Zanak'ondry. "
7:11 Ary ny anjely rehetra nitsangana manodidina ny tamin'ny seza fiandrianana, mbamin'ny loholona sy ny zava-manan'aina efatra. Dia niankohoka izy roa lahy rehefa heverina ny seza fiandrianana, ary ireo dia niankohoka an'Andriamanitra,
7:12 nanao hoe:: "Amen. Fitahiana sy ny voninahitra sy ny fahendrena sy ny fisaorana, haja ary ny hery sy tanjaka ho an'Andriamanitsika, mandrakizay doria. Amen. "
7:13 Ary ny anankiray tamin'ny loholona namaly ka nanao tamiko: "Ireo olona izay niakanjo akanjo fotsy lava, iza izy ireo? Ary taiza izy ireo avy?"
7:14 Ary hoy izy taminy:, "Tompoko, fantatrareo. "Ary hoy izy tamiko: "Ireo no ireo izay efa tonga avy tamin'ny fahoriana lehibe, dia efa nanasa ny akanjony ka efa nanao fotsy noho ny amin'ny ran'ny Zanak'ondry.
7:15 Noho izany, dia mitoetra eo anoloan'ny seza fiandrianan 'Andriamanitra, dia hanompo azy, andro sy alina, ao amin'ny tempoliny. Ary ny Iray izay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana, dia hitoetra eo aminy.
7:16 Tsy ho noana, na no hangetaheta, intsony. Ary aoka tsy hisy ny masoandro noravany azy, na izay hafanana akory.
7:17 Fa ny Zanak'ondry, izay eo afovoan'ny seza fiandrianana, no hanapaka azy, ary Izy no hitondra azy ho any amin'ny loharanon'ny ranon'aina. Ary Andriamanitra dia hofafany ny ranomaso rehetra amin'ny masony. "
8:1 Ary rehefa novahany ny tombo-kase fahafito, dia nangina tany an-danitra tokony ho antsasaky ny ora.
8:2 Ary hitako fa, indro anjely fito koa nitsangana teo amin'ny anatrehan'Andriamanitra. Ary nomena trompetra fito ho azy ireo.
8:3 Ary nisy anjely iray nanatona, Ary nitsangana teo anoloan'ny alitaran'i, mitazona lovia volamena. Ary ny ditin-kazo manitra betsaka nomena azy, ka mba hanatitra fanatitra eo ambonin'ny alitara volamena, izay eo anoloan'ny seza fiandrianana 'Andriamanitra, ny vavaky ny olona masina rehetra,.
8:4 Ary ny setroky ny ditin-kazo manitra ny vavaka ataon'ny olona masina niakatra, eo anatrehan 'Andriamanitra, eo an-tanan'ny Anjely.
8:5 Ary ny anjely nandray ny lovia volamena, ka dia nameno azy tamin'ny afo teo amin'ny alitara, ary rehefa natsipiny any an-tany, ary nisy kotrokorana sy feo sy helatra ary horohoron-tany lehibe.
8:6 Ary ny anjely fito izay mihazona ny trompetra fito dia niomana, mba hitsoka ny anjomara.
8:7 Ary ny voalohany nitsoka ny anjomara anjely. Ary nisy havandra sy afo, miharo ra; Ary nazera etỳ an-tany. Ary ny ampahatelony 'ny tany may, ary ny ampahatelony 'ny hazo dia tanteraka nandoro ny, ary ny zava-maniry maitso nodorana.
8:8 Ary ny anjely faharoa nitsoka ny anjomara. Dia nisy toa tendrombohitra lehibe, mirehitra amin'ny afo, nazera tany an-dranomasina. Ary ny ampahatelony-dranomasina tonga tahaka ny ra.
8:9 Ary ny ampahatelony zava-manan'aina izay miaina any an-dranomasina dia maty. Ary ny ampahatelon'ny sambo no rava.
8:10 Ary ny anjely fahatelo nitsoka ny anjomara. Ary nisy kintana lehibe latsaka avy any an-danitra, mirehitra toy ny fanilo. Ary dia voafafy teny amin'ny ny ampahatelon'ny ony sy eo an-loharanom-baovao ny rano.
8:11 Ary ny anaran'ilay kintana dia atao hoe Zava-mangidy. Ary ny ampahatelony ny rano niova ho zava-mahafaty. Ary maro ny olona matin'ny rano, satria efa nangidy izany.
8:12 Ary ny anjely fahefatra nitsoka ny anjomara. Ary ny ampahatelony ny masoandro, ary ny ampahatelony ny volana, ary ny ampahatelony ny kintana no namely, toy izany fa ny ampahatelon'ny mba nisy nanamaizina. Ary ny ampahatelony ny andro tsy mamiratra, ary toy izany koa ny alina.
8:13 Ary hitako fa, indro, dia nandre ny feon'ny irery voromahery iray nanidina teny afovoan'ny lanitra, niantso tamin'ny feo mahery: "Loza, Loza, Loza, ny mponina eto an-tany, avy amin'ny feo sisa ny anjely telo, izay tsy ho ela dia haneno ny trompetra!"
9:1 Ary ny anjely fahadimy nitsoka ny anjomara. Ary hitako fa, indro eto an-tany, ny kintana izay latsaka avy tany an-danitra, ary ny fanalahidin'ny amin'ny fantsakana ao amin'ny lavaka tsy hita noanoa nomena azy.
9:2 Ary nanokatra ny lavaka tsy hita noanoa fantsakana tao amin'ny. Ary ny setroky ny lavaka fantsakana niakatra, tahaka ny setroka ary amin'ny lafaoro lehibe. Ary ny masoandro sy ny rivotra dia nanamaizina ny setroka avy amin'ny fantsakana.
9:3 Ary ny valala nivoaka avy tamin'ny setroka avy amin'ny fantsakana ho any an-tany. Sy ny hery nomena azy ireo, toy ny hery izay ny maingoka amin'ny tany.
9:4 Ary ny nandidiana azy ireo fa tsy maintsy tsy hanimba ny zavamaniry amin'ny tany, na inona na inona maitso, na ny hazo, fa ny olona izay tsy manana ny tombo-kasen'Andriamanitra eo amin'ny handriny.
9:5 Ary nomena azy ireo fa tsy hamono azy ireo, fa izy ireo fa hampijaly azy dimy volana. Ary ny fampijaliana dia tahaka ny fampijaliana ny maingoka, raha mamely olona.
9:6 Ary tamin'izany andro izany, dia hitady fahafatesana ny olona ka tsy hahita azy io. Ary izy ireo dia haniry ny ho faty, sy ny fahafatesana handositra azy.
9:7 Ary ny endriky ny valala nitovy soavaly voaomana hiady. Ary eny an-dohany toy ny satro-boninahitra dia zavatra mitovy amin'ny volamena. Ary ny tarehiny dia tahaka ny tarehin'ny olona.
9:8 Ary nanam-bolo tahaka ny volom-behivavy. Ary ny nifiny tahaka ny nifin'ny liona.
9:9 Ary nanam-piarovan-tratra tahaka ny fiarovan-tratra vy. Ary ny fikopakopaky ny elany dia tahaka ny fikotrokotroky ny maro mihazakazaka soavaly, miriotra ho amin'ny ady.
9:10 Ary manan-drambo mitovy amin'ny maingoka. Ary nisy stingers amin'ny rambony, ary izany koa ny fahefana hanao ratsy ny olona mandritra ny dimy volana.
9:11 Ary izao no azony ho azy ny mpanjaka, ny anjelin'ny lavaka mangitsokitsoka, ny anarany amin'ny teny Hebreo dia Loza Hanjo; amin'ny teny grika, mpandringana; amin'ny teny latinina, Exterminator.
9:12 Loza iray efa nivoaka, nefa indro, Mbola misy loza roa manatona rehefa afaka izany,.
9:13 Ary ny anjely fahenina nitsoka ny anjomara. Ary nahare irery feo ary tamin'ny tandroky ny alitara volamena, izay eo anatrehan'i imason'Andriamanitra,
9:14 nanao tamin'ny anjely fahenina, izay nanana ny trompetra: "Afaho ny anjely efatra izay mifatotra any Eofrata, ony lehibe."
9:15 Ary ny anjely efatra nafahana, izay efa voaomana ho amin'izany ora, ary ny andro, sy ny volana, sy ny taona, mba hahafaty ny iray ampahatelon'ny olona.
9:16 Ary ny isan'ny miaramila ny mpitaingin-tsoavaly dia roanjato tapitrisa. Fa nahare ny isany.
9:17 Ary izaho koa nahita ny soavaly teo amin'ny fahitana. Ary ireo izay nipetraka teo aminy nisy tratra tahaka ny afo sy ny hyacinth sy solifara. Ary ny lohan'ny soavaly dia tahaka ny lohan'ny liona. Ary avy amin'ny vavany i afo sy setroka ary solifara.
9:18 Ary ny anankiray ampahatelon'ny olona novonoina noho ireo fahoriana telo: dia ny afo sy ny setroka ary ny solifara avy, izay nanomboka avy amin'ny vavany.
9:19 Fa ny herin'ny soavaly ireo dia eo amin'ny vavany sy ny rambony. Fa ny rambony mitovy menarana, manan-doha; ary izany koa ireo izay hahatonga loza.
9:20 Ary ny sisa amin'ny olona, izay tsy voavono amin'izao fahoriana, tsy nibebaka avy amin'ny asan'ny tànany, ka dia tsy nety hivavaka amin'ny demonia, na ny sampy volamena sy volafotsy sy varahina sy vato ary hazo, izay tsy mahajery,, na tsy hihaino, na afa-mamindra.
9:21 Ary izy ireo tsy nibebaka avy ny famonoany olona, na ho afaka amin'ny zava-mahadomelina, na ho afaka amin'ny fijangajangana, na avy tamin'ny halatra nataony koa.
10:1 Ary hitako fa, indro nisy anjely mahery iray hafa, nidina avy any an-danitra, nitafy rahona. Ary ny avana dia teo amin'ny lohany, ary ny tavany dia tahaka ny masoandro, ary ny tongony tahaka ny andry dia afo.
10:2 Ary natao teny an-tanany boky misokatra kely. Ary nametraka ny ankavanana tongony eo amin 'ny ranomasina, ary ny ankaviany teo amin'ny tany.
10:3 Ary niantso tamin'ny feo mahery, ao ny fanaon'ny liona mierona. Ary rehefa niantsoantso, fito dia nikotroka ny kotrokorana.
10:4 Ary raha ny mofo fito kotrokorana dia nikotroka ny feony, Aho, dia efa hanoratra. Fa izaho nahare feo avy tany an-danitra, milaza amiko hoe:: "Asio tombo-kase izay ny kotrokorana fito no niteny, fa aza soratana. "
10:5 Ary Ilay Anjelin'i, izay efa hitako, dia nitsangana teo ambonin'ny ranomasina sy eo ambonin'ny tany, nanandratra ny tànany manandrify ny lanitra ny.
10:6 Ary dia nianiana tamin'ny Ilay velona mandrakizay mandrakizay, izay nahary ny lanitra, ary ny zavatra izay ao aminy; sy ny tany, ary ny zavatra izay ao aminy; ary ny ranomasina, ary ny zavatra izay ao aminy: fa ny fotoana dia tsy hisy intsony,
10:7 fa amin'ny andro hitsofan'ny anjely fahafito, raha izy no hanomboka hitsoka ny anjomara, ny zava-miafina 'Andriamanitra dia ho vita tanteraka, araka izay efa nanambara ao amin'ny Filazantsara, ny alalan 'ny mpaminany mpanompony.
10:8 Ary indray, Ary nahare feo avy tany an-danitra niteny tamiko sy nanao hoe:: "Mandehana, ka misokatra handray ny taratasy avy tamin'ny tànan'ny anjely mitsangana eo ambonin'ny izay ranomasina sy eo ambonin'ny tany."
10:9 Dia nankany amin'ny anjely, nanao taminy hoe mba hanome ahy ny boky. Ary hoy izy tamiko: "Raiso ny boky ka handevona azy. Ary izany no hahatanteraka ny mangidy ao amin'ny vavony, fa eo am-bavanao dia ho mamy tahaka ny tantely. "
10:10 Ary nahazo ny taratasy avy tamin'ny tànan'ny anjely, ary nataoko lany ringana azy. Ary dia mamy toy ny tantely ao am-bavako. Ary rehefa efa nandevona azy, ny vavoniko dia nanjary nangidy.
10:11 Ary hoy izy tamiko, "Tsy maintsy maminany indray ianao ny momba ny firenena maro sy vahoaka ary fiteny ary ny mpanjaka maro."
11:1 Ary nampitaniny volotara, toy ny tehina, nomena ahy. Ary nisy nilaza tamiko: "Mitsangàna, ka refeso ny tempolin'Andriamanitra, ary izay mivavaka ao, ary ny alitara.
11:2 Fa ny atrium, izay tsy amin'ny tempoly, nanorina azy manokana, fa aza refesina, satria nomena ny hafa firenena eo. Ary ho fanitsakitsahanareo ny tanàna masina roa amby efa-polo volana.
11:3 Ary Izaho dia hanolotra ny vavolombeloko roa, ka haminany noho ny arivo sy enim-polo amby roan-jato andro, nitafy lamba fisaonana.
11:4 Ireo ilay hazo oliva roa sy fitoeran-jiro roa, koa nitsangana teo amin'ny imason'i Jehovah ny tany.
11:5 Ary raha misy dia te-hanisy ratsy azy ireo, afo hivoaka avy amin'ny vavany, ka handevona ny fahavalony. Ary raha misy dia te-nofonosiny azy ireo, dia tsy maintsy hatao maty izy.
11:6 Ireo manam-pahefana hotampenako ny lanitra, ka mba tsy hilatsahan'ny ranonorana mandritra ny andro ny maminany. Ary manam-pahefana amin'ny rano, ny mamadika azy ho ra, sy hamely ny tany amin'ny isan-karazany ny fahoriana na oviana na oviana izy ireo no.
11:7 Ary rehefa ho tanteraka ny filazany, ny bibi-dia niakatra avy ao amin'ny lavaka tsy hita noanoa te-hiady aminy, ka handresy azy ireo, ka hamono azy ireo.
11:8 Ary ny vatany mandry eny an-dalambe amin'ny tanàna lehibe, izay an'ohatra antsoina hoe 'Sodoma' sy 'Ejipta,'Ny toerana izay ny Tompo nohomboana tamin'ny hazo fijaliana koa.
11:9 Ary izay avy tamin'ny foko sy vahoaka ary fiteny sy firenena, mijery ny tenany mandritra ny telo andro sy tapany iray. Ary tsy hamela ny vatany mba hapetraka ao amin'ny fasana.
11:10 Ary ny mponina amin'ny tany, ho faly aminy, Ka dia hankalaza, ka handefa fanomezana ho iray hafa, satria ireo mpaminany roa ireo nampijaliana izay nonina eto an-tany.
11:11 Ary rehefa afaka telo andro sy tapany iray, ny toe-tsaina avy tamin'Andriamanitra niditra tao anatin'ireo. Ary nijoro tamin'ny tongony izy. Ary nisy raiki-tahotra indrindra noho ireo izay nahita azy.
11:12 Ary nahare feo mahery avy tany an-danitra, ka nanao taminy, "Niakatra tany eto!"Dia niakatra tany an-danitra tamin'ny rahona. Ary nahita azy ny fahavalony.
11:13 Ary tamin'izany ora, ny horohoron-tany lehibe. Ary ny anankiray ampahafolon'ny ny City latsaka. Ary ny anaran'ny olona novonoina tao amin'ny horohoron-tany nisy fito arivo. Ary ny sisa dia natsipy tany tahotra, ka nanome voninahitra an'Andriamanitry ny lanitra.
11:14 Ny loza faharoa dia nivoaka, nefa indro, ny loza fahatelo manatona haingana.
11:15 Ary ny anjely fahafito nitsoka ny anjomara. Ary nisy feo mafy tany an-danitra, nanao hoe:: "Ny fanjakana amin'izao tontolo izao dia lasa ny Tompo sy ny Kristy, ary Izy no hanjaka mandrakizay mandrakizay. Amen. "
11:16 Ary ny loholona efatra amby roa-polo, izay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana eo imason 'Andriamanitra, niankohoka, dia niankohoka an'Andriamanitra, nanao hoe::
11:17 "Misaotra anao, Tompo ô, Andriamanitra Tsitoha, iza, ary izay, ary iza no ho avy. Fa efa naka ny fahefana lehibe, ary efa nanjaka.
11:18 Ary tezitra ny firenena, fa tonga ny fahatezeranao, ary ny fotoana ho an'ny maty mba hotsaraina, ary ny Mamalia ny mpaminany mpanomponao, ary ny olona masina, ary izay matahotra ny anaranao, na kely na lehibe, sy handringanana ireo izay nanimba ny tany. "
11:19 Ary ny tempolin'Andriamanitra any an-danitra novohana. Ary ny fiaran'ny fanekeny teo dia hita ao amin'ny tempoliny. Ary nisy helatra sy feo sy kotrokorana, ary horohoron-tany, ary havandra vaventy.
12:1 Ary nisy famantarana lehibe hita tany an-danitra: dia vehivavy mitafy ny masoandro, ary ny volana no eo ambanin'ny tongony teo, ary tamin'ny lohany nisy satro-boninahitra kintana roa ambin'ny folo.
12:2 Ary satria efa bevohoka, dia niantso sady miteraka, ary nijaly izy mba hiteraka.
12:3 Ary nisy famantarana iray koa tany an-danitra hita. Ary indro, nisy dragona mena lehibe, nanan-doha fito sy tandroka folo, ary tamin'ny lohany nisy diadema fito.
12:4 Ary ny rambony dia manala ny ampahatelon'ny nidina kintana amin'ny lanitra ka manjera ireny ho amin'ny tany. Ary ny dragona nijanona teo anatrehan'ilay vehivavy, ilay efa hiteraka, amin'izay mba, nony nentiny nivoaka, mba handrapaka ny zanany.
12:5 Ary niteraka zazalahy, izay ela mba hanapaka ny firenena rehetra amin'ny tehim-by. Sy ny zanany nakarina ho any amin'Andriamanitra sy ny seza fiandrianany.
12:6 Ary ravehivavy kosa nandositra an-manirery, izay toerana nisy natao vonona avy amin'Andriamanitra, ka mba ahi-maitso azy amin'izany toerana arivo sy enim-polo amby roan-jato andro.
12:7 Ary nisy ady tany an-danitra. Michael ary ny anjeliny koa niady tamin'ilay dragona, ary ilay dragona dia niady, ary toy izany koa ny anjeliny.
12:8 Nefa tsy naharesy, ary misy tany fahazoana azy dia tsy hita intsony any an-danitra.
12:9 Ary dia natsipy avy, fa dragona lehibe, dia ilay menarana ela, izay atao hoe devoly sy Satana, izay hararaotin'i izao tontolo izao. Ary dia natsipy tetỳ an-tany, ary ny anjeliny koa nazera niaraka taminy.
12:10 Ary nahare feo mahery tany an-danitra, nanao hoe:: "Ankehitriny dia tonga ny famonjena sy ny hatsaran-toetra sy ny fanjakan 'Andriamanitsika sy ny fahefan'ny Kristiny,. Fa ny mpiampanga ny rahalahintsika efa nazera, dia ilay miampanga azy eo anatrehan'Andriamanitsika andro aman'alina.
12:11 Ary izy ireo naharesy azy noho ny amin'ny ran'ny Zanak'ondry sy ny teny ny ny fijoroany ho vavolombelona. Ary izy ireo tsy tia ny ainy, na dia ho amin'ny fahafatesana.
12:12 Noho io, faly, Ry lanitra, sy izay rehetra mitoetra ao aminy. Loza ho an'ny tany sy ny ranomasina! Fa ny devoly efa nidina ho anao, mitazona tezitra mafy, satria fantany fa kely ny fotoana. "
12:13 Ary rehefa hitan'ilay dragona fa efa natsipy tetỳ an-tany, dia nanenjika ilay vehivavy niteraka ny zazalahy izy.
12:14 Ary ny elatra roa an'ny voromahery lehibe dia nomena ny vehivavy, mba hanidinany lasa, any an-efitra, azy toerana, izay izy no efa nitaiza mandritra ny fotoana kelikely, sy ny fotoana, ary antsasaky ny fotoana, ny tavan'i 'ny menarana.
12:15 Ary ilay menarana namoaka avy amin'ny vavany, ny amin-dravehivavy, rano toy ny renirano, ka mety hahatonga azy ho babo teo amoron'ny ony.
12:16 Fa ny tany Nanampy ny vehivavy. Ary nisokatra ny tany ka hifantoka tanteraka ny vavany ny ony, izay ny dragona naniraka tsy ho eo am-bavany.
12:17 Ary ilay dragona dia tezitra tamin-dravehivavy. Ary araka izany dia lasa nankany hanao hiady tamin'ny zanany sisa azy, ireo izay mitandrina ny didin 'Andriamanitra sy izay mihazona ny filazana an'i Jesosy Kristy.
12:18 Ary nitsangana teo ambonin'ny fasiky ny ranomasina.
13:1 Ary hitako fa, indro, nisy bibi-niakatra avy any an-dranomasina, nanan-doha fito sy tandroka folo, sy ny tandrony dia nisy diadema folo, sy ny ny lohany nisy anarana fitenenan-dratsy.
13:2 Ary ny bibi-dia izay efa hitako dia mitovy ny leoparda, ary ny tongony tahaka ny tongotry ny bera, ary ny vavany dia tahaka ny vavan'ny liona. Ary ilay dragona dia nanome hery sy ny fahefana lehibe ho azy.
13:3 Ary hitako fa ny lohany iray dia toa hovonoina ho amin'ny fahafatesana, fa ny mahafaty fery sitrana. Ary izao tontolo izao iray manontolo ao amin'ny gaga nanaraka ilay bibi-dia.
13:4 Ary niankohoka teo anoloan'ilay dragona, no nanome ny fahefana ho an'ny bibi-. Ary niankohoka teo anoloan'ny bibi, nanao hoe:: "Iza no tahaka ny bibi-? Ary iza no ho afaka hiady aminy?"
13:5 Ary nomena azy ny vava, miteny zavatra mihoapampana sy fitenenan-dratsy. Sy ny fahefana nomena azy hanao zavatra ho roa amby efa-polo volana.
13:6 Ary nanokatra ny vavany eo amin'ny fitenenan-dratsy an'Andriamanitra, dia ny hiteny ratsy ny anarany sy ny tabernakeliny, ary ireo izay monina any an-danitra.
13:7 Ary nisy nomena azy mba hiady tamin'ny olona masina sy handresy azy ireo ny. Sy ny fahefana nomena azy ny isam-pirenena sy ny olona sy ny fiteny ary ny firenena.
13:8 Ary ny olona rehetra ny mponin'ny tany niankohoka teo anoloan'ny bibi, ireo manana ny anarany voasoratra tsy, avy ny niandohan'ny izao tontolo izao, ao amin'ny bokin'ny fiainan'ny Zanak'ondry, izay novonoina.
13:9 Raha misy manan-tsofina, aoka izy hihaino.
13:10 Na iza na iza no nitondra ho babo, -ko babo dia mandeha. Na zovy na zovy no hamono amin'ny sabatra, amin'ny sabatra tsy maintsy hovonoina izy,. Indro ny faharetana sy ny marary finoan'ny olona masina.
13:11 Ary hitako fa, indro biby hafa koa niakatra avy any amin'ny tany. Dia nanan-tandroka roa tahaka ny Zanak'ondry, fa izy no niteny tahaka ny dragona.
13:12 Ary izy nanao zavatra rehetra ny fahefan'ny bibidia voalohany eo imasony. Ary izy no nahatonga ny tany, sy izay monina eo aminy, hiankohoka eo anatrehan'ny biby voalohany, izay ratra mahafaty sitrana.
13:13 Dia vita famantarana lehibe, dia toy izany koa fa mety hiteraka afo mba hidina avy any an-danitra ho amin'ny tany eo imason'ny olona.
13:14 Ary izy nitaona olona miaina eto an-tany, amin'ny alalan'ny famantarana izay nomena azy mba hanatanteraka eo imason'ny bibi-dia, hoe ho an'izay monina eto an-tany mba hanao ny sarin'ilay bibidia, izay nanan-ratra ny sabatra, nefa velona.
13:15 Ary nisy nomena azy mba hanome ny fanahy ny sarin'ny bibi-, ka ny sarin'ny bibi-dia miteny. Ary izy nanao zavatra ka na iza na iza tsy miankohoka eo anoloan'ny sarin'ny bibi-dia hovonoina.
13:16 Dia hahatonga ny olon-drehetra, na kely na lehibe, manankarena sy mahantra, maimaim-poana sy ny mpanompo, mba hanana toetra eo amin'ny tànany ankavanana na eo amin'ny handriny,
13:17 mba tsy hisy afaka hividy na hivarotra, raha tsy manana ny toetra, na ny anaran'ny bibi-, na ny isan'ny anarany.
13:18 Indro ny fahendrena. Na iza na iza manana ny faharanitan-tsaina, aoka izy no mamaritra ny isan'ny bibi-. Fa ny isan'ny olona, ary ny isa dia enina amby enim-polo amby enin-.
14:1 Ary hitako fa, indro, ary indro, ny Zanak'ondry nitsangana teo an-tendrombohitra Ziona ambony, ary ny fehiny dia efa-polo amby zato-efatra arivo, nanana ny anaran'ny Zanak'ondry sy ny anaran'ny Rainy voasoratra teo amin'ny handrin'izy.
14:2 Ary nahare feo avy tany an-danitra nisy, tahaka ny firohondrohon'ny rano be, sy tahaka ny feon'ny kotrokorana mafy. Ary ny feo izay reko dia toy ny an'ny mpihira, raha milalao eny an-lokanganareo.
14:3 Ary izy ireo dia nihira izay toa toy ny canticle vaovao eo anoloan'ny seza fiandrianana sy eo anatrehan'ny zava-manan'aina efatra sy ny anti-panahy. Ary tsy nisy olona afaka hitanisa ny canticle, afa-tsy ireo dia efa-polo amby zato-efatra arivo, izay navotana niala tamin'ny tany.
14:4 Ireo no ireo izay tsy voaloto tamin'ny vehivavy, fa virijina izy. Ireo manaraka ny Zanak'ondry na aiza na aiza izy handeha. Lreo no navotana avy tamin'ny olona ho voaloham-bokatra ho an'Andriamanitra sy ny Zanak'ondry.
14:5 Ary eo am-bavany, tsy nisy lainga hita, fa tsy misy indro kely eo anoloan'ny seza fiandrianana 'Andriamanitra.
14:6 Ary hitako fa, indro nisy anjely hafa iray, manidina eo afovoan 'ny lanitra, mihazona ny Filazantsara mandrakizay, ka hitory ny filazantsara izay mipetraka eo amin'ny tany sy ny an'ny firenena rehetra sy ny foko sy fiteny sy ny olona,
14:7 nanao tamin'ny feo mahery: "Matahora ny Tompo, ka hanome voninahitra azy, fa ny ora fitsarany dia tonga. Ary miankohofa eo anoloan'izay nanao ny lanitra sy ny tany, ny ranomasina ary ny loharano ny rano. "
14:8 Ary nisy anjely iray nanaraka, nanao hoe:: "lavo, rava Babylona lehibe, izay mamo ny firenena rehetra amin'ny divain'ny fahatezerana sy ny fijangajangana. "
14:9 Ary ny anjely fahatelo, nanaraka ireny, nanao tamin'ny feo mahery: "Raha misy efa niankohoka teo anoloan'ny bibi, na ny sariny, na mandray ny toetrany eo amin'ny handriny na amin'ny tànany,
14:10 tenany ihany no hisotro koa ny divain'ny avy ny fahatezeran'Andriamanitra no, izay efa divay miharo mafy tao anatin'ny kapoaky ny fahatezerany, ary izy hampijalina amin'ny afo sy solifara eo anatrehan'ny anjely masina sy eo anatrehan'ny Zanak'ondry imason'ny.
14:11 Ary ny setroky ny fijaliana no hiakatra mandrakizay mandrakizay. Ary ho tsy manam-pitsaharana, na andro na alina, ireo izay efa nivavaka ny biby na ny sariny, na izay efa nandray ny toetra ny anarany. "
14:12 Indro ny faharetana 'ny Olomasina, dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an'i Jesosy.
14:13 Ary nahare feo avy tany an-danitra nisy, milaza amiko hoe:: "Soraty: Sambatra ny maty, dia izay maty ao amin'ny Tompo, amin'izao fotoana izao sy any aoriana, hoy ny Fanahy, mba hahita fiadanana amin'izay nisasarany. Fa ny asany manaraka azy. "
14:14 Ary hitako fa, indro, ary indro, rahona fotsy. Ary teo ambonin'ny rahona dia iray nipetraka teo, mitovy ny zanak'olona, manana satro-boninahitra volamena teo amin'ny lohany, sy antsy fijinjana maranitra teny an-tanany.
14:15 Ary nisy anjely iray koa nivoaka avy tao amin'ny tempoly, niantso tamin'ny feo mahery ny olona nipetraka teo ambonin'ny rahona: "Ampandehano ny antsimbilony sy hijinja! Fa ny ora fijinjana dia tonga, satria ny vokatry ny tany efa masaka. "
14:16 Ary ny olona izay nipetraka teo ambonin'ny rahona naniraka ny antsy fijinjany ho amin'ny tany, ka voajinja ny tany.
14:17 Ary nisy anjely iray koa nivoaka avy tao amin'ny tempoly izay any an-danitra; izy koa nanana fijinjana maranitra.
14:18 Ary nisy anjely iray koa nivoaka avy teo amin'ny alitara, izay nitana fahefana tamin'ny afo izy. Ary niantso tamin'ny feo mahery ho an'izay natao ny fijinjana maranitra, nanao hoe:: "Ampandehano ny fijinjanao maranitra, ary mijinja ny sampahom-boaloboka avy amin'ny tanim-boaloboky ny tany,, satria ny voaloboka efa matotra. "
14:19 Ary Ilay Anjelin'i nandefa ny nitana fijinjana maranitra teny an-tany, ary vokatra ny tanim-boaloboky ny tany,, ary rehefa natsipiny tao amin'ny tavy lehibe 'ny fahatezeran' Andriamanitra.
14:20 Ary ny tavy voahitsaka teny an-dafin'ny tanàna, ary ny rà nandeha avy ny tavy, dia tahaka ny avo tahaka ny ampondra-tsoavaly, avy ny iray arivo stadio enin-jato amby.
15:1 Ary hitako fa, indro nisy famantarana iray koa tany an-danitra, lehibe sy mahagaga: anjely fito, mihazona ny fito farany fahoriana. Fa ireny zavatra ireny, ny fahatezeran 'Andriamanitra dia vita.
15:2 Ary hitako fa, indro, toa ranomasina fitaratra miharo afo. Ary ireo izay naharesy ny bibi-dia sy ny sariny ary ny isan'ny anarany, dia nitsangana teo ambonin'ny ranomasina fitaratra, mihazona ny lokangan'Andriamanitra,
15:3 ary mihira ny canticle 'i Mosesy, ny mpanompon'Andriamanitra, ary ny canticle Zanak'ondry, nanao hoe:: "Lehibe sy mahagaga ny asanao, Tompo ô, Andriamanitra Tsitoha. Mahitsy sy marina ny lalanao, Mpanjaka ny sokajin-taona rehetra.
15:4 Iza no tsy hatahotra anao, Tompo O, ary milofo amin 'ny anaranao? Fa ianao irery ihany no voatahy. Fa ny firenena rehetra hanatona ary fatratra eo imasonao, noho ny didim-pitsaranao miharihary. "
15:5 Ary rehefa afaka izany,, hitako, ary indro, ny tempoly, dia ny tabernakelin'ny vavolombelona tany an-danitra novohana.
15:6 Ary ny anjely fito nivoaka avy tao amin'ny tempoly, mihazona ny fito fahoriana, niakanjo akanjo rongony fotsy madinika fotsy madio, ka nampisikina manodidina ny vata amin'ny fehikibo volamena malalaka.
15:7 Ary ny anankiray tamin'ny zava-manan'aina efatra nanome ny anjely fito lovia volamena fito, feno ny fahatezeran'Andriamanitra no, ny iray izay velona mandrakizay mandrakizay.
15:8 Ary ny tempoly dia feno setroka avy tamin'ny fiandrianana 'Andriamanitra sy ny heriny. Ka tsy nisy nahazo niditra tao amin'ny tempoly, mandra-pahatongan'ny fahoriana fito tamin'ny anjely fito vita.
16:1 Ary nahare feo mahery avy tao amin'ny tempoly, nanao tamin'ny anjely fito: "Mivoaha ary aidino ny lovia fito feno ny fahatezeran 'Andriamanitra eto an-tany."
16:2 Ary ny anjely voalohany dia nivoaka ka Nanolotra ny lovia eto an-tany. Ary ny mafy sy ny ratra mafy indrindra nitranga teo amin'ny lehilahy izay nanana ny toetry ny biby, ary amin 'ireo izay nitsaoka ny biby na ny sariny.
16:3 Ary ny anjely faharoa nampidina ny vilia eo ambonin'ny ranomasina. Ary tonga toy ny ran 'ny maty, mbamin'ny zava-manan'aina any an-dranomasina dia maty.
16:4 Ary ny anjely fahatelo nampidina ny vilia eo ambonin'ny renirano sy ny loharanom-baovao ny rano, ary tonga rà ireny.
16:5 Ary nahare ny anjelin'ny rano aho nanao hoe:: "Ianao no marina, Tompo O, izay ankehitriny sy taloha: Masina ilay efa nitsara ireo zavatra ireo.
16:6 Fa efa nandatsaka ny ran ny olona masina sy ny mpaminany, ary toy izany kosa no nomenao hosotroiny dia rà. Fa mendrika izany. "
16:7 Ary avy teo amin'ny alitara, Reko iray, nanao hoe:, "Na ankehitriny, Ry Tompo Andriamanitra Tsitoha, ny fitsarany marina sy marina. "
16:8 Ary ny anjely fahefatra nampidina ny vilia eo amin'ny masoandro. Ary nisy nomena azy mba hampahory ny olona amin'ny hafanana sy afo.
16:9 Ary ny olona dia main'ny hafanana be ny, dia niteny ratsy ny anaran'Andriamanitra,, izay mihazona fahefana amin'izao fahoriana, nefa tsy mibebaka, ka manome voninahitra azy.
16:10 Ary ny anjely fahadimy nampidina ny vilia eo amin'ny seza fiandrianan'ilay bibi-. Ary nanjary maizina ny fanjakany, ary ny olona nitsakotsako ny lelany amin'ny amin'ny tebiteby.
16:11 Dia niteny ratsy an'Andriamanitry ny lanitra, noho ny tebiteby sy ny ratra, nefa tsy hibebaka amin'ny asany.
16:12 Ary ny anjely fahenina nampidina ny vilia baolina amin'izany Eofrata, ony lehibe. Ary ny rano ritra, ka dia lalana mba ho vonona amin 'ny mpanjaka avy any amin'ny fiposahan'ny masoandro.
16:13 Ary hitako fa, indro, avy tamin'ny vavan'ilay dragona, ary avy tamin'ny vavan'ilay bibi, ary avy amin'ny vavan'ny mpaminanivavy diso, fanahy maloto telo afaka amin'ny fomba sahona.
16:14 Fa izao no fanahin'ny demonia izay mahatonga ny famantarana. Ary mandroso ho amin'ny mpanjakan'ny tany rehetra misy eto an-tany, mba hanangona azy ireo ho amin'ny ady tamin'ny andro lehiben'ilay Andriamanitra Mahery Indrindra.
16:15 "Indro, I tonga toy ny mpangalatra. Sambatra izay tsy mailo sy izay miaro ny vestment, fandrao mandeha mitanjaka izy, ka hita ny henatra. "
16:16 Ary efa nanangona azy miaraka amin'ny 'ny toerana izay atao hoe, amin'ny teny hebreo, Hara-magedona.
16:17 Ary ny anjely fahafito dia nampidina ny vilia eo amin'ny rivotra. Ary nisy feo mahery nivoaka avy tao amin'ny tempoly avy teo amin'ny seza fiandrianana, nanao hoe:: "Tanteraka ireo."
16:18 Ary nisy helatra sy feo sy kotrokorana. Ary nisy horohoron-tany lehibe, ny tsara fanahy toy ny tsy mbola nitranga satria olona efa eto an-tany, lehibe loatra izany karazana horohoron-tany.
16:19 Ary ny tanàna lehibe dia nanjary vaky ho telo toko. Ary ny tanàna any amin'ny tany hafa firenena latsaka. Ary Babylona lehibe dia tonga ao an-tsaina eo anoloan 'Andriamanitra, mba homena azy ny kapoaky ny divain'ny fahatezerana fahatezerany.
16:20 Ary ny nosy rehetra nandositra, ary ny tendrombohitra tsy hita intsony.
16:21 Sy ny havandra ho mavesatra toy ny talenta nidina avy tany an-danitra ho amin'ny olona. Ary niteny ratsy an'Andriamanitra, noho ny fahorian'ny ny havandra, fa lehibe fatratra tokoa.
17:1 Ary ny anankiray tamin'ny anjely fito, ireo izay mihazona ny lovia fito, nanatona ka niteny tamiko, nanao hoe:: "Avia, Fa hasehoko anao ny fanamelohana ny mpivaro-tena lehibe, izay mipetraka eo ambonin'ny rano maro.
17:2 taminy, ny mpanjakan'ny tany no fornicated. Ary ireo ny mponin'ny tany no mamo ny divain'ny fivarotan-tena. "
17:3 Ary nitondra ahy tamin'ny Fanahy ho any an-efitra. Ary hitako fa, indro nisy vehivavy nipetraka teo ambonin'ny bibi-jaky, feno anarana fitenenan-dratsy, nanan-doha fito sy tandroka folo.
17:4 Ary ravehivavy dia nitafy lamba volomparasy manodidina sy ny mena, ary niravaka volamena sy vato soa ary perila, mitana kapoaka volamena teny an-tànany, feno ny zava-betaveta ary ny fahalotoany fijangajangany.
17:5 Ary anarana nosoratana teo amin'ny handriny: zava-miafina, Babylona Lehibe, ny renin'ny ny fijangajangana sy ny fahavetavetan 'ny eto an-tany.
17:6 Ary hitako fa, indro fa ilay vehivavy tamin'izay mamo amin'ny ran ny olona masina sy ny ran'ny martioran'i Jesosy. Ary gaga aho, Nony nahita azy, miaraka amin'ny famantarana lehibe.
17:7 Ary hoy ilay anjely tamiko: "Nahoana ianao no manontany tena? Izaho hilaza aminao ny zava-miafina momba an-dravehivavy, sy ny bibi-dia mitondra azy, izay manana loha fito sy tandroka folo.
17:8 Ny biby izay hitanao, dia, ary tsy, ary tsy ho ela avy any amin'ny lavaka tsy hita noanoa. Ary dia mandeha mivoaka amin 'ny famongorana. Ary ny mponina ambonin'ny tany (ireo manana ny anarany tsy voasoratra eo amin'ny bokin'ny fiainana hatramin'ny nanorenana izao tontolo izao) dia ho gaga rehefa nahita ny bibi-taloha ary tsy.
17:9 Ary izao no ho an'ny olona izay mahatakatra, izay manana fahendrena: ny loha fito dia tendrombohitra fito, eo izay ipetrahan-dravehivavy, ary mpanjaka fito ireo.
17:10 Efa lavo ny dimy, iray ihany no, ary ny iray mbola tsy tonga. Ary rehefa tonga, dia tsy maintsy mijanona mandritra ny fotoana fohy.
17:11 Ary ny bibi-dia izay, ary tsy, dia izy no ihany koa ny fahavalo, Ary avy amin'ny fito, dia mandeha izy amin 'fandringanana.
17:12 Ary ny tandroka folo efa hitanao, dia mpanjaka folo; ireo tsy mbola nahazo fanjakana, fa hahazo fahefana, toy ny hoe mpanjaka izy ireo, ho ora iray, nanaraka ilay bibi.
17:13 Ireo mihazona ny iray drafitra, ary izy no hanolotra ny heriny sy ny fahefany ho an'ilay bibi-.
17:14 Ireo dia hiady amin'ny Zanak'ondry, ary ny Zanak'ondry no handresy azy. Fa Izy no Tompon'ny tompo sy Mpanjakan'ny mpanjaka. Ary ny momba Azy, dia olona voantso, sy voafidy, sy mahatoky. "
17:15 Ary hoy izy tamiko: "Ny rano efa hitanao, toerana ny vehivavy janga mipetraka, dia olona sy ny firenena maro sy ny fiteny.
17:16 Ary ny tandroka folo efa hitanao teo amin'ny bibi-dia, ireo no hankahala ilay vehivavy fornicates, ka dia hahatonga azy ho lao sy mitanjaka, Ka dia ho mitsako ny nofony, ary izy no handoro azy tanteraka amin'ny afo.
17:17 Fa Andriamanitra efa nanome ny fony mba ataovy aminy na inona na inona no mahafinaritra, mba hanome ny fanjakany ho an'ilay bibi-, mandra-tenin 'Andriamanitra dia mety ho vita.
17:18 Sy ny vehivavy izay efa hitanao, dia tanàna lehibe, izay mihazona ny fanjakana ambony noho ny an'ny mpanjakan'ny tany. "
18:1 Ary rehefa afaka izany,, Hitako fa, indro nisy anjely hafa iray, nidina avy any an-danitra, manana fahefana lehibe. Ary ny tany dia hazavain'ny voninahiny.
18:2 Ary niantso tamin'ny hery, nanao hoe:: "lavo, rava Babylona lehibe. Ary izy efa tonga fonenan'ny demonia, ary ny keepsake ny fanahy maloto rehetra, sy ny zara-tany momba maloto rehetra sy ny zavatra feno fankahalana manidina.
18:3 Fa ny firenena rehetra efa imbibed ny divain'ny fahatezerana noho ny fijangajangany. Ary ny mpanjakan'ny tany no fornicated taminy. Ary ny mpandranto amin'ny tany tonga mpanan-karena dia noho ny herin 'ny fahafinaretana. "
18:4 Ary nahare feo iray koa tany an-danitra, nanao hoe:: "Mialà aminy, ny oloko, mba tsy ho mpandray anjara tao amin'ny fahafinaretana, ary mba tsy ho ny mpandray ny fahoriana.
18:5 Fa ny fahotany efa nandefona ny alalan 'na dia any an-danitra, ary ny Tompo efa nahatsiaro ny ratsy nataony.
18:6 Mamalia azy, koa rehefa nadika ho anao. Ary hamaly azy avo roa heny, araka ny asany. Afangaroy ho azy anjaran-droa, ny kapoaka izay nofenoiny.
18:7 Noho ny tena izy no nanome voninahitra ny tenany, ary velona tamin'ny fy, betsaka dia omeo fanaintainana sy alahelo azy. Fa tao am-pony, hoy izy: 'Izaho no nomena fahefana hitondra vadin'ny mpanjaka,'ary, «Tsy izaho no maty vady,'ary, 'Aho, dia tsy hahita alahelo.'
18:8 Izany no antony, ny fijalianao dia tsy tonga ao anatin'ny iray andro: fahafatesana sy alahelo ary mosary. Ary izy hodorana amin'ny afo. Fa Andriamanitra, Iza no hitsara azy, mahery.
18:9 Ary ny mpanjakan'ny tany, izay fornicated taminy sy niaina nanaram-po fatratra, dia hitomany sy hisaona ho azy noho ny aminy, raha mahita ny setroky ny adin'ny,
18:10 hijanona eny lavitra eny, avy tamin'ny fahatahorana ny fijaliana, nanao hoe:: 'Loza! Loza! ho any Babylona, ilay tanàna lehibe, fa tanàna mafy. Fa tamin'ny ora iray monja, dia tonga ny fitsarana. '
18:11 Ary ny mpandraharaha avy amin'ny tany dia hitomany sy hisaona azy, satria tsy hisy hividy ny entam-barotra intsony:
18:12 dia entana volamena sy volafotsy sy vato soa ary perila, ary ny rongony fotsy madinika sy lamba volomparasy sy landy sy jaky, ary ny hazo rehetra Citrus hazo, sy ny fitaovana rehetra ivory, sy ny fitaovana rehetra amin'ny vato soa sy ny varahina sy vy ary vato sanga,
18:13 ary ny kanelina sy ny mainty cardamom, sy ny fofona sy menaka manitra sy ditin-kazo manitra, ary ny divay sy ny diloilo sy ny koba tsara toto sy vary tritika, ary ny biby mpitondra entana sy ondry sy soavaly sy efa-naterak'ireo kodiarantsika sarety, ary ny andevo sy ny fanahin 'ny olona.
18:14 Ary ny vokatry ny fanirian'ny fanahinao efa lasa niala taminareo. Ary ny zavatra rehetra matavy sy tsara tarehy no maty avy aminao. Ary dia tsy hahita indray ireo zavatra ireo.
18:15 Ny mpandranto izany zavatra izany, izay efa tonga mpanankarena, dia hijanona lavitra azy, avy tamin'ny fahatahorana ny fijaliana, nitomany sy nisaona,
18:16 ary nanao hoe:: 'Loza! Loza! ho any ilay tanàna lehibe, izay nitafy rongony fotsy madinika sy lamba volomparasy sy jaky, ary izay niravaka volamena sy vato soa ary perila. '
18:17 Fa lehibe toy izany harena nentina tany amin'i fahoriana tamin'ny ora iray monja. Ary ny shipmaster, ary izay rehetra hitety ny farihy, ary ny tantsambo, ary ireo izay miasa any an-dranomasina, nijanona teny lavitra eny.
18:18 Ary ny vahoaka niantso, nahita ny toerana ny adin'ny, nanao hoe:: 'Inona tanàna mitovy tanàna lehibe ity?'
18:19 Ary nanopy vovoka ny lohany. Ary ny vahoaka niantso, nitomany sy nisaona, nanao hoe:: 'Loza! Loza! ho any ilay tanàna lehibe, izay rehetra nanan-tsambo teny an-dranomasina efa tonga mpanankarena avy ny zava-tsarobidiny. Fa izy efa nanao lao tamin'ny ora iray monja.
18:20 Faly noho izay manjo azy, O any an-danitra, O Apostoly masina sy ny mpaminany. Fa Andriamanitra efa nitsara aminy. ' "
18:21 Ary nisy anjely mahery anankiray nibata vato, Mitovy amin'ny lehibe fikosoham-bary, ary rehefa natsipiny tany an-dranomasina, nanao hoe:: "Noho izany dia hery Babylona, ilay tanàna lehibe, hariana any. Ary izy dia tsy ho hita intsony.
18:22 Ary ny feon'ny mpihira, sy ny mpitendry mozika, sy ny sodina ary ny trompetra mpilalao dia tsy ho re ao aminao intsony. Ary ny mpanao asa tanana rehetra moa dia tsy ho hita ao aminao intsony. Ary ny feon'ny fikosoham-bary tsy ho azo re ao aminao intsony.
18:23 Ary ny fahazavan'ny jiro tsy hamirapiratra dia ao aminao intsony. Ary ny feon 'ny mpampakatra sy ny ampakarina tsy ho re ao aminao intsony. Fa ny mpandrantonao no mpitarika eto an-tany. Fa ny firenena rehetra dia voafitaka noho ny zava-mahadomelina.
18:24 Ary teo anatiny no nahitana ny ran'ny mpaminany sy ny Olomasina, sy izay rehetra izay novonoina teny ambonin'ny tany. "
19:1 Rehefa afaka izany,, Nahare zavatra toy ny feon'ny vahoaka betsaka tany an-danitra maro, nanao hoe:: "Haleloia! Fiderana sy ny voninahitra ary ny hery dia ho an'Andriamanitsika.
19:2 Fa marina sy mahitsy ny fitsarana ataony, izay efa nitsara ilay vehivavy janga lehibe izay nanimba ny tany tamin'ny fijangajangany. Ary efa voamarina ny ran'ny mpanompony avy amin'ny tanany. "
19:3 Ary indray, hoy izy ireo: "Haleloia! Fa ny Niakatra ny setroka mandrakizay mandrakizay. "
19:4 Ary ny loholona efatra amby roa-polo sy ny zava-manan'aina efatra dia niankohoka nivavaka tamin'Andriamanitra, mipetraka eo amin'ny seza fiandrianan'i, nanao hoe:: "Amen! Haleloia!"
19:5 Ary nisy feo koa nivoaka avy teo amin'ny seza fiandrianana, nanao hoe:: "Asehoy fiderana an'Andriamanitsika, ianareo mpanompony rehetra,, sy ianareo izay matahotra Azy, na kely na lehibe. "
19:6 Ary nahare zavatra toy ny feon'ny vahoaka betsaka, sy tahaka ny firohondrohon'ny rano be, sy tahaka ny feon'ny kotroka lehibe, nanao hoe:: "Haleloia! Fa Jehovah Andriamanitsika, ny Tsitoha, dia nanjaka.
19:7 Aoka isika ho faly sy ho ravoravo. Ary aoka isika hanome voninahitra azy. Fa amin'ny fampakaram-bady-badin'ny Zanak'ondry no tonga, ary ny vadiny efa niomana. "
19:8 Ary navela ho azy fa tokony hanarona ny tenany amin'ny rongony fotsy madinika, kanto sy fotsy. Fa izany rongony fotsy madinika izany dia ny fanamarinana ny Olomasina.
19:9 Ary hoy izy tamiko: "Soraty: Sambatra izay nantsoina ho amin'ny fanasana fampakaram-bady-badin'ny Zanak'ondry. "Ary hoy izy tamiko, "Ireo teny ho an'Andriamanitra dia marina."
19:10 Ary niankohoka teo an-tongony, mba mankafy azy. Ary hoy izy tamiko: "Tandremo mba tsy hanao izany. Izaho no mpanompo namanao, ary Izaho dia eo ny rahalahinareo, izay mitana ny filazana an'i Jesosy. mankafy Andriamanitra. Fa ny filazana an'i Jesosy no fanahin'ny faminaniana. "
19:11 Ary nahita ny lanitra misokatra, ary indro, nisy soavaly fotsy. Ary izy no ilay nipetraka teo amboniny dia atao hoe Mahatoky sy Marina. Ary araka ny rariny no mitsara sy ady.
19:12 Ary ny masony dia tahaka ny lelafo, ary tamin'ny lohany nisy diadema maro, nanana anarana voasoratra, izay tsy misy mahalala afa-tsy ny tenany.
19:13 Ary miakanjo amin'ny vestment nofafazany rà. Ary ny anarany atao hoe: NY TENIN'ANDRIAMANITRA.
19:14 Ary ny antokon'ny miaramila izay any an-danitra dia nanaraka azy tamin'ny soavaly fotsy, nitafy rongony fotsy madinika, fotsy no madio.
19:15 Ary avy amin'ny vavany maranitra nanao sabatra roa lela, ka izany mba hamelezany ny firenena. Ary Izy hanapaka azy amin'ny tehim-by. Ary izy no manitsaka ny famiazana ny fahatezeran'i ny fahatezeran 'Andriamanitra Tsitoha.
19:16 Ary manana ny lambany sy ny feny voasoratra: MPANJAKAN'NY MPANJAKA SY TOMPON'NY TOMPO.
19:17 Ary hitako fa, indro nisy anjely anankiray, nitsangana teo amin'ny masoandro. Ary niantso tamin'ny feo mahery, nanao tamin'ny vorona izay manidina eo afovoan 'ny lanitra, "Avia ary hanangona ny fanasana lehibe 'Andriamanitra,
19:18 mba hihinananareo ny nofon'ny mpanjaka, sy ny nofon'ny tribunes, sy ny nofon'ny ny mahery, sy ny nofon'ny soavaly sy izay nitoetra azy, ary ny nofon'ny olona rehetra: maimaim-poana sy ny mpanompo, na kely na lehibe. "
19:19 Ary hitako ilay bibi-dia sy ny mpanjakan'ny tany mbamin'ny tafiny, rehefa tafangona mba hiady hanohitra azy, izay nipetraka teo ny soavaly, sy amin'ny miaramilany.
19:20 Ary ny bibi-dia nahazo ny, dia mbamin'ny mpaminanivavy diso, izay eo anatrehany no nahatonga ny famantarana, izay izy nitaona ireo izay nanaiky ny toetry ny bibi-dia sy izay miankohoka eo anoloan'ny sariny. Roa ireo dia natsipy velona ho any amin'ny farihy afo mirehitra solifara.
19:21 Ary ny sasany dia matin'ny sabatra izay mivoaka avy amin'ny vava 'Ilay nipetraka teo ambonin'ny soavaly. Ary ny vorona rehetra dia tofoka ny nofony.
20:1 Ary hitako fa, indro anjely, nidina avy any an-danitra, mitana an-tanany ny lakilen'ny lavaka mangitsokitsoka sy rojo vy lehibe.
20:2 Ary nosamboriny ilay dragona, ilay menarana ela, dia ny Devoly sy Satana, ka namatotra ary arivo taona.
20:3 Ary nanipy ary ho amin'ny lavaka tsy hita noanoa, Ary rehefa nahorony ka notombohiny, ka mba tsy hamitaka ny firenena intsony, mandra-arivo taona dia vita. Ary rehefa afaka izany,, dia tsy maintsy hovahana mandritra ny fotoana fohy.
20:4 Ary nahita seza fiandrianana. Ary nisy nipetraka teo amboniny. Ary ny fitsarana nomena azy ireo. Ary ny fanahy izay notapahin-doha noho ny filazana an'i Jesosy sy noho ny Tenin'Andriamanitra, ary izay tsy mankafy ny bibi-dia, na ny sariny, na manaiky ny toetrany eo amin'ny handriny, na eny an-tànany: ary velona izy ka niara-nanjaka tamin'i Kristy arivo taona.
20:5 Fa ny sisa amin'ny maty dia tsy mbola velona, mandra-arivo taona dia vita. Izany no Fitsanganana amin'ny maty Voalohany.
20:6 Sambatra sy masina izay mandray anjara amin'ny Fitsanganana amin'ny maty Voalohany. Nandritra ireo ny fahafatesana faharoa tsy manan-kery. Fa ho mpisoron'Andriamanitra sy Kristy, ary hiara-manjaka aminy mandritra ny arivo taona.
20:7 Ary rehefa tapitra ny arivo taona dia efa vita, I Satana dia hovahana avy ao amin'ny fonja, ary hivoaka ka mamitaka ny firenena eny amin 'ny efatra vazan-tany, Dia Goga sy Magoga. Ary Izy no hanangona azy ireo ho amin'ny ady, izay manana isa dia tahaka ny fasika any an-dranomasina.
20:8 Ary niakatra nanerana ny namaky ny tany izy, dia nanodidina ny tobin'ny olona masina sy ny tanàna malala.
20:9 Ary afo avy amin 'Andriamanitra dia nidina avy tany an-danitra ka nandany azy. Ary ny devoly, izay nitaona azy, dia natsipy tany amin'ny farihy afo sy solifara,
20:10 toerana na ny bibi-dia sy ny diso dia nampijaliana mpaminanivavy, andro sy alina, mandrakizay doria.
20:11 Ary hitako fa, indro nisy seza fiandrianana fotsy lehibe, Ary ny anankiray nipetraka teo amboniny, avy izay nahita nandositra tany sy ny lanitra, ary tsy nisy toerana ho azy ireo.
20:12 Ary nahita ny maty aho, lehibe na kely, mijanona eo jerena ny seza fiandrianana. Ary novelarina ny boky. Ary nisy boky iray koa nosokafana, dia ny Bokin'ny Fiainana. Ary ny maty dia notsaraina araka ireo zavatra izay efa voasoratra ao amin'ny boky, araka ny asany.
20:13 Ary ny ranomasina dia namoaka ny maty, dia izay tao anatiny. Ary ny fahafatesana sy ny helo namoaka ny maty tao aminy. Ka dia notsaraina, ny tsirairay araka ny asany.
20:14 Sy ny fahafatesana sy ny helo dia natsipy tany amin'ny farihy afo. Izany no fahafatesana faharoa.
20:15 Ary izay tsy hita voasoratra teo anatin'ny bokin'ny fiainana, dia natsipy tany amin'ny farihy afo.
21:1 Dia nahita ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao. Fa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany lasa, ary ny ranomasina dia tsy misy intsony.
21:2 Sy izaho, John, nahita ny tanàna masina, Jerosalema Vaovao, midina avy tamin'Andriamanitra any an-danitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa mihaingo hihaona amin'ny vadiny.
21:3 Ary nahare feo mahery avy teo amin'ny seza fiandrianana, nanao hoe:: "Indro, ny tabernakelin'Andriamanitra dia amin'ny olona. Ary hitoetra eo aminy, ary ireo ho olony. Ka Andriamanitra mihitsy no ho Andriamaniny aminy.
21:4 Ary Andriamanitra dia hofafany ny ranomaso rehetra amin'ny masony. Ary ny fahafatesana dia tsy hisy intsony. Ary na alahelo, na fitarainana avy, na alahelo dia ho intsony. Fa ny voalohany efa lasa ny zavatra. "
21:5 Ary Ilay nipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianana, nanao hoe:, "Indro, I havaoziko ny zavatra rehetra. "Ary hoy izy tamiko, "Soraty, fa tanteraka ireo teny ireo mahatoky sy marina. "
21:6 Ary hoy izy tamiko: "Tanteraka ireo. Izaho no Alfa sy Omega, ny fiandohana sy ny fiafarana. Ho an'ireo izay mangetaheta, Dia homeko maimaim-poana avy amin'ny loharanon'ny ranon'aina.
21:7 Na iza na iza mandresy dia handova izany zavatra izany. Ary Izaho ho Andriamaniny, ary izy ho zanako.
21:8 Fa ny osa, ary ny tsy mpino, sy ny vetaveta, sy ny mpamono olona, sy ny mpijangajanga, sy ny zava-mahadomelina, sy ny mpanompo sampy, ary ny mpandainga rehetra, izao no anisan'ny farihy mirehitra afo sy solifara, izany no fahafatesana faharoa. "
21:9 Ary ny anankiray tamin'ny anjely fito, izay mihazona ny lovia fito feno ny fahoriana farany, nanatona ka niteny tamiko, nanao hoe:: "Avia, dia hasehoko anao ny ampakarina, ny vadin'ny Zanak'ondry. "
21:10 Ary nitondra ahy tamin'ny Fanahy ho any an-tendrombohitra sady lehibe no avo. Ary izy naneho ahy ny tanàna masina i Jerosalema, midina avy tamin'Andriamanitra any an-danitra,
21:11 sady manana ny voninahitr'Andriamanitra. Ary ny famirapirany dia tahaka ny an'ny vato sarobidy, dia tahaka ny vato jaspy, na ny tahaka ny krystaly.
21:12 Ary Nisy ampiantany, lehibe no avo, manana vavahady roa ambin'ny folo. Ary eo amin'ny vavahady roa ambin'ny folo anjely. Ary ny anarana voasoratra eo aminy, dia ny anaran'ny foko roa ambin'ny folon'ny zanak'Israely.
21:13 Eo atsinanana vavahady telo, ary ny avaratra vavahady telo, ary ny tany atsimo vavahady telo, ary eo andrefana vavahady telo.
21:14 Ary ny màndan'ny tanàna dia misy fanorenana roa ambin'ny folo. Ka dia nihatra taminy ny roa ambin'ny folo lahy no anaran 'ny apostoly roa ambin' ny Zanak'ondry.
21:15 Ary izy no ilay niteny tamiko dia nihazona bararata volamena fandrefesana, mba handrefesany ny tanàna, sy ny vavahadiny ary ny rindrina.
21:16 Ary ny tanàna dia nametraka avy toy ny efamira, ary toy izany koa ny lavany dia toy ny lehibe tahaka ny sakany. Dia nandrefy ny tanàna tamin'ny volotara volamena roa ambin'ny folo arivo sy iray alina stadio, ary ny lavany sy ny sakany ary ny haavony dia mitovy.
21:17 Ary nandrefy ny màndany toy ny efa-polo amby zato hakiho-efatra, ny refin'ny olona, izay avy amin'ny anjely.
21:18 Ary ny rafitry ny màndany dia ny vato jaspy. Na izany aza tena, tao an-tanàna koa dia volamena tsara, toy ny fitaratra madio.
21:19 Ary ny fanorenan'ny màndan'ny tanàna dia voaravaka isan-karazany ny vato soa. Ny fanorenana voalohany jaspy ny, ny faharoa dia ny safira, ny fahatelo dia ny kalkedona, ny fahefatra dia ny emeralda,
21:20 ny fahadimy sardonyksa dia ny, ny fahenina karneola dia ny, ny fahafito krysolita dia ny, ny fahavalo dia ny volon'ny krysolita,, ny fahasivy topaza avy any, ny fahafolo krysopraso dia ny, ny fahiraika ambin'ny folo dia ny setroka, ny faharoa ambin'ny folo ametista dia ny.
21:21 Ary ny vavahady roa ambin'ny folo dia perila roa ambin'ny folo dia, iray isaky ny, ka dia vavahady tsirairay no nanaovana vatosoa iray. Ary ny tena an-kianjan'ny tanana dia volamena tsara, toy ny fitaratra manganohano.
21:22 Ary tsy nahita tempoly tao. Fa ny Tompo Andriamanitra Tsitoha no ny tempoliny, ary ny Zanak'ondry.
21:23 Ary ny tanàna tsy mba mila ny masoandro na ny volana hamirapiratra aminy. Fa ny voninahitr'Andriamanitra no nanazava azy Andriamanitra, ary ny Zanak'ondry no jirony ny.
21:24 Ary ny firenena maro no handeha amin'ny fahazavany. Ary ny mpanjakan'ny tany dia hitondra ny voninahiny ho ao aminy.
21:25 Ary ny vavahadiny tsy hirindrina mandritra ny tontolo andro, fa tsy mba hisy alina ao amin'io toerana io.
21:26 Ary dia ho entina ny voninahitra sy ny hajan'ny firenena maro ho ao anatiny.
21:27 Tsy Tsy hiditra ao mihitsy izay tsy maloto, na inona na inona zava-betaveta niteraka, na inona na inona diso, fa izay efa voasoratra ao amin'ny bokin'ny fiainan'ny Zanak'ondry.
22:1 Ary izy naneho ahy ny ony ny ranon'aina, mamirapiratra toy ny kristaly, mivoaka avy ao amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra sy ny Zanak'ondry.
22:2 Teo afovoan'ny arabe ny lehibe, ary eo amin'ny andaniny roa amin'ny ony, dia ny hazon 'aina, nitondra voa roa ambin'ny folo, fanatitra iray voa ho an'ny isam-bolana, ary ny ravin'ny hazo dia ho an'ny fahasalamana ny firenena.
22:3 Ary ozona rehetra tsy ho ao intsony. Fa ny seza fiandrianan'Andriamanitra sy ny Zanak'ondry ho eo aminy, ary ny mpanompony dia hanompo Azy.
22:4 Ka hahita ny tavany. Ary ny anarany dia ho eo amin'ny handriny.
22:5 Ary alina intsony no ho fanazavana. Ary tsy mila ny fahazavan'ny jiro, na ny fahazavan 'ny masoandro, satria ny Tompo Andriamanitra no hanazava azy. Ary izy ireo no hanjaka mandrakizay mandrakizay.
22:6 Ary hoy izy tamiko: "Tanteraka ireo teny ireo mahatoky sy marina." Ary ny Tompo, ny Andriamanitry ny fanahin'ny mpaminany, naniraka ny anjeliny haneho amin'ny mpanompony izay zavatra tsy maintsy hitranga tsy ho ela:
22:7 "Fa indro, Manatona haingana aho! Sambatra izay mitandrina ny tenin'ny faminaniana amin'ity boky ity. "
22:8 Sy izaho, John, nahare sy nahita ireo zavatra ireo. Ary, rehefa reny ny hitany, I niankohoka teo, mba fatratra teo anoloan'ny tongotr'ilay anjely, izay manambara izany tamiko.
22:9 Ary hoy izy tamiko: "Tandremo mba tsy hanao izany. Fa Izaho no mpanompo namanao, ary izaho amin'ny rahalahinareo ny mpaminany, ary eo anivon 'ireo izay mitandrina ny tenin'ny faminaniana amin'ity boky ity. Fatratra an'Andriamanitra. "
22:10 Ary hoy izy tamiko: "Aza asio tombo-kase ny tenin'ny faminaniana amin'ity boky ity. Fa efa akaiky ny fotoana.
22:11 Na iza na iza manao ratsy, mba mbola manao ratsy. Ary na iza na iza no maloto, mba mbola maloto. Ary na iza na iza no marina, dia mety mbola ho marina. Ary ny anankiray Izay masina, dia mety mbola ho masina. "
22:12 "Indro, Manatona haingana aho! Ary ny hamaly ato amiko, mba hamaliako ny olona rehetra araka ny asany.
22:13 Izaho no Alfa sy Omega, ny voalohany sy ny Farany, ny fiandohana sy ny fiafarana. "
22:14 Sambatra izay manasa ny akanjony amin'ny ran'ny Zanak'ondry. Tahaka izany anie izy ireo manan-jo ny hazon 'aina; dia afaka miditra amin'ny vavahady ho ao an-City.
22:15 Fa any ivelany ny alika, sy ny zava-mahadomelina, ary ny lehilahy miray amin'ny lehilahy, sy ny mpamono olona, ary ireo izay manompo sampy, ary izay rehetra tia sy manao ny diso.
22:16 "I, Jesosy, efa naniraka ny anjeliko, mba hijoro ho vavolombelona ny amin'izany zavatra izany ho anareo any amin'ny Fiangonana. Izaho no Solofo sy ny Origin Davida, ny maraina mamirapiratra Star. "
22:17 Ny Fanahy sy ny ampakarina manao hoe: "Manatòna." Ary izay rehetra mandre, aoka izy hoe:: "Manatòna." Ary na iza na iza mangetaheta, Aoka izy hanatona. Ary na iza na iza no vonona, dia aoka handray ny ranon'aina, malalaka.
22:18 Fa miantso ho vavolombelona aho rehetra nihaino ny tenin'ny faminaniana amin'ity boky ity. Raha misy efa nanampy ireo, Andriamanitra dia hanampy eo aminy ny fahoriana voasoratra ato amin'ity boky ity.
22:19 Ary raha misy dia efa hesoriko amin'ny teny amin'ny bokin'ity faminaniana ity, Andriamanitra dia hesorin'Andriamanitra ny anjarany amin'ny Bokin'ny Fiainana, ary avy teo amin'ny Masina City, ary avy ireo zavatra izay efa voasoratra ato amin'ity boky ity.
22:20 Izay manatitra fijoroana ho vavolombelona ny amin'izany zavatra izany, hoy i: "Na ankehitriny, Manakaiky haingana aho. "Amen. Avia, Tompo Jesosy.
22:21 Anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika Ho aminareo rehetra. Amen.